Ciidamada AMISOM oo isaga baxay saldhigyo ay ku lahaayeen Shabeellaha Hoose - Awdinle Online
Ciidamada AMISOM oo isaga baxay saldhigyo ay ku lahaayeen Shabeellaha Hoose
Wararka ka imaanaya deeganno ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku warramaya in xalay ilaa iyo maanta Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ay baneeyeen fariisimihii ay ku laheeyeen deegaannada Ceelasha Biyaha, Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobolkaasi.
Ciidamadaan ayaa la sheegay in ay aadeen deegaanno iyo degmooyin ka mida isla gobolka Shabeellaha Hoose,kuwaas oo aan ilaa iyo hadda la shaacin.
Taliska militeriga Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay in qaar ka tirsan Ciidamada dawlada Soomaaliya ee ku sugan No.50 (Nambar Konton), ay tagaan goobihii ay ka baxeen AMISOM.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku badan yihiin dagaallamayaasha Al-Shabaab, iyadoo dawlada Soomaaliya iyo saaxaabadeeda Caalamkana ay dadaallo badan ku bixiyaan sidii ay uga saari lahaayeen Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweyne farmaajo oo booqasho deg deg ah ku tegay Ereteriya
Next articleKulan u bilaawday Farmaajo iyo dhiggiisa Ereteriya